एभरेष्ट बैंकको सेयर कारोबार सर्वाधिक, कति छ मूल्य ?
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको सेयर कारोबार सर्वाधिकर भएको छ । कारोबार सुरु भएको सवा घण्टामै अथवा यो समाचार तयार गर्ने बेलासम्म बैंकको ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कम्पनीको सेयरमूल्य ८१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग, यस्तो छ जागिर खाने अवसर ! (सूचनासहित)
विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग, यस्तो छ जागिर खाने अवसर ! (स...
समता घरेलु लघुवित्तको सेयर रजिष्ट्रारमा आरबिबि मर्चेण्ट बैंक...